Gịnị bụ Net Promoter Score (NPS) Sistem? | Martech Zone
Gịnị bụ Net Promoter Score (NPS) Sistem?
Izu gara aga, agara m Florida (Ana m eme nke a kwa nkeji ọ bụla ma ọ bụ karịa) na nke mbụ m gere akwụkwọ na Audible na ụzọ ala. Ahọrọ m Ajụjụ Kachasị Elu 2.0: Otu Companlọ Ọrụ Na-akwado Nkwado Na-eme nke Ọma na Worldwa Ahịa Ndị Ahịa mgbe gị na ụfọdụ ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa kwurịtara okwu n'ịntanetị.
The Net Promoter Score sistemụ gbadoro ụkwụ site n’ajụjụ dị mfe… the ajụjụ kacha:
Na ogo nke 0 ruo 10, olee otu ị ga-esi kọọrọ enyi gị?
Akwụkwọ ahụ gara n'ihu ịkọwa etu esi emeghe usoro emeghe emeghe na ụlọ ọrụ niile, na-agbanwekarị karịa 0 gaa na 10, ajụjụ a na-agbanwe mgbe ụfọdụ, na ajụjụ ndị a na-agbaso na oge iji nye akara ngosipụta na-egosi ahụike. nke ụlọ ọrụ gị. Buru n'uche na ọ bụghị akara a kapịrị ọnụ achọrọ ịkọ otu ụlọ ọrụ gị si arụ ọrụ nke ọma, a ga-enyocha ya maka akara ndị asọmpi niile na ụlọ ọrụ gị. Ikwesighi inwe 9 mgbe ụlọ ọrụ gị ndị ọzọ na-agbanye 3s! Industriesfọdụ ụlọ ọrụ na-adọta ndị ahịa dị egwu.
NPS na-abụ ụzọ a na-ahụkarị iji chọpụta iguzosi ike n'ihe ndị ahịa na mmetụta nke ahịa, ahịa, ọrụ ndị ahịa yana ọbụna ahụike ego nke ụlọ ọrụ. N'adịghị ka ọtụtụ usoro arụmọrụ arụmọrụ dị mkpụmkpụ nke ụlọ ọrụ, NPS na-eleba anya ka ndị ahịa gị ga-anọnyere gị yana ọbụlagodi ịkwado gị. Ebe ọ bụ na ijide ndị ahịa dị oke mkpa maka ịba uru na okwu ọnụ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji nweta ndị ahịa, NPS na-egosi na ọ bụ usoro dị oke mma maka ịkọ ahụike nke ụlọ ọrụ ogologo oge. Mgbe ngalaba na atumatu niile kwadoro iji bulie ntụkwasị obi ndị ahịa gị, ị gaghị etinye ihe ize ndụ nke ịnwe asọmpi n'ime nzukọ ahụ nwere ike mepụta ọnụ ọgụgụ buru ibu - mana enyela nnukwu ahụmịhe ndị ahịa.
Na mgbọrọgwụ ya, NPS = Pasent nke ndị nkwalite - Onu ogugu ndi mmadu. Yabụ, ọ bụrụ na 10% nke ndị ahịa gị na-akwalite ụlọ ọrụ gị na 8% na-emerụ akara gị site na okwu ọnụ, ị nwere NPS nke 2.
Usoro Net Promoter Score na-agbaji ndị ahịa gị ka ha bụrụ ndị nkwalite, ndị nkwarụ na ihe na-emebi emebi. Companylọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ịbelata ọ bụ ndị nkatọ ya n'ihi na ọ na-ewe ihe dị ka ndị nkwalite 5 iji luso onye ọ bụla detor… nke bụ obere ọrụ! Azụmaahịa ọ bụla ga-aka mma ma ọ bụrụ na ọ zere ihe na-emebi iwu na ndị na-ekwujọ ya kpamkpam ma dọta ndị ahịa ziri ezi - ndị nkwalite. E wezụga ntụkwasị obi ndị ahịa, NPS na-abanyekwa n'ime nyocha afọ ojuju ndị ọrụ. Dị ka ị ga - atụ anya ịchọta ndị ahịa ịkwalite azụmahịa gị, ị chọkwara ndị ọrụ ga - akwalite ya!
Ndi akwukwo na Onye nnochite anya tinyere ihe omuma a na Net Promoter Score na-achịkọta ya:
PS: Ọ bụ ezie na akwụkwọ ahụ dị oke egwu, IMO echere m na isiokwu a nwere ike ibelata ihe karịrị awa asaa ruo naanị di na nwunye. Nke ahụ bụ njikọ njikọta m ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta akwụkwọ ahụ.
Tags: algọridimgbakọọahịa chụpụrụ ụwaezi ndị ahịandị na-asọ oyiesi gbakọọ akara nkwalite netesi gbakọọ npsNet NkwadoCompanieslọ ọrụ Net Netnet nkwalite akarankpnps npsusoro npsụzọndị na-akwaliteAkaraAjụjụ Kachasị 2.0
I Kwesịrị Iche Brandkọkọrịta Mgbasa Ozi Gị?